नेपाल आज | आफूले गर्दा ‘लिला’, अरुले गर्दा क्यारेक्टर ‘ढिला’ !
आफूले गर्दा ‘लिला’, अरुले गर्दा क्यारेक्टर ‘ढिला’ !
काठमाडौं । यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद तथा अखिलकी अध्यक्ष नविना लामा चर्चामा छिन् । चर्चा उनको कुनै सुन्दर कामले होइन, विरोधाभाष अभिव्यक्तिले हो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, गर्दा सरकारलाई तथानम गर्दै आन्दोलन गर्नेमा यिनै नेतृ थिइन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनको स्टाटस यतिबेला भाइरल भइरहेको छ । त्यसमा उनले लेखेकी छन्, ‘ नालायक, असक्षम देउवा सरकार राजीनामा दे । जनजीवीकाकोपक्षमा लड्दै आएको संगठन अनेरास्ववियुले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धिका विरुद्ध गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको ज्यादति निन्दनीय छ । कमिसन खाने उद्देश्यले हप्तै पिच्छे गर्ने मुल्यवृद्धिले आम जनतामा पर्ने असरलाई अनेरास्ववियु टुलुट हेरेर बस्न सक्दैन ।’
अहिले मुलुकमा नेकपाको सरकार छ । यो सरकार गठन भएयता पनि पाँच पटक पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । पेट्रोल त लिटरकै ११३ पुगेको छ भने बजारका अरु वस्तुमा पनि प्रभाव पार्ने डिजेल लिटरकै ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने र उता घट्दा नेपालमा घट्ने नेपाल आयल निगमले जवाफ दिने गरेको छ । तर यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेकोछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनेबित्तिकै क्रान्तिकारी छवि प्रमाणित गर्न विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । यतिबेला पनि त्यस्तै भएको छ । अहिले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नर्सरी संगठन नेविसंघलगायत केही संगठन आन्दोलनमा छन् । नेकपाका विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा छैनन् । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामाले त विभिन्न अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘हामी देउवा सरकारका पालामा पनि आन्दोलनमा थिएनौं, (तस्वीरमा हेर्नुहोस्, उनको त्यो बेलाको भनाइ) अहिले पनि छैनौं । हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने वस्तुको मूल्य बढ्छ । यो हाम्रो हातको कुरा होइन ।’
नेतृ लामालाई आफ्नै विगतले अहिले गिज्याइरहेको जस्तो भएको छ । हिन्दीमा एक वाक्य छ, ‘हम करे तो लिला, और करे तो क्यारेक्टर ढिला ?’ जस्तै भएको छ नवीना लामाको विरोधाभाष शैली ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा अभिकर्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६
सुनको मुल्य यथावत्, चाँदीमा ५ रुपैयाँ बढ्यो
बिग बास लिगः डिभिलियर्सको टिमविरुद्ध बलिङ गर्दै सन्दीपआवद्ध मेलबर्न
भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरका घरमा तोडफोड प्रयास
नक्कली कपाल लगाउँछन बलिउडका यी स्टारहरू, नत्र यस्तो छ उनीहरुको सक्कली रुप
आयो हिउँदे झरी, पर्‍यो माहुरीपालकलाई भारी